ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Cilmi-baadhayaashu waxay ka baqayaan xiriirka ka dhexeeya cilladda wadnaha wadnaha iyo kansarka
Kansarka ma jabin karaa wadnahaaga? Daraasad cusub ayaa muujinaysa in uu jiro xiriir ka dhexeeya kansarka iyo cillad wadnaha oo jaban.
Daraasaddan ayaa lagu daabacay Arbacadii Wargeyska Ururka Wadnaha ee Maraykanka, 1 ee dadka 6 ee qaba cudurka wadnaha wadnaha ee jaban waxay leeyihiin kansar, iyo in bukaanadaan ay u badan tahay in ay u dhintaan shan sano gudahood, marka la barbar dhigo bukaanka qalalka wadnaha ee aan lahayn kansar.
Cudurka wadnaha ee qalafsan, oo sidoo kale loo yaqaanno "cardiomyopathy stress" ama kalotsubo cardiomyopathy, waa xaalad ku-meel-gaadh ah oo lagu keeni karo xaalado walaac leh. Inta lagu jiro cilladda wadnaha wadnaha, hal qayb oo ka mid ah wadnaha ayaa joojiya boodboodka caadiga ah, taas oo sababa wadnaha intiisa kale si xoog leh, sida uu qabo Mayo Clinic.
A wax ka barta 2018 waxay ogaadeen in dadka bukaanka ah ee qaba cudurka wadnaha ee jaban ay leeyihiin taariikh kansar ah. Natiijadaas ayaa keentay in baarayaashu ay ogaadaan haddii ay jirto xiriir ka dhexeeya labada xaaladood.
Daraasaddan cusub, cilmi-baarayaashu waxay eegeen Diiwaanka Caalamiga ah ee Takotsubo ee bukaanka 1,600 ee qaba xanuunka wadnaha. Waxay ogaadeen in 1 ee 6 uu qabo kansar. Dadka qaba kansarka, boqolkiiba 90 waxay ahaayeen haween. Nooca ugu badan ee kansarka waa naaska, oo ay ku xigto nidaamka caloosha iyo mindhicirka, mareenka neefta, xubnaha gudaha, maqaarka iyo meelaha kale.
Marka la barbardhigo kuwa aan kansar lahayn, bukaanka wadnaha ee xanuunka qaba kansarka waxay ahaayeen:
Ku dhowaad labo jeer ayay u badan tahay in ay ku dheceen kicin muuqaal ah oo ka soo horjeeda dareenka shucuur ee cilladda wadnaha wadnaha.
Sida ay u badan tahay in ay ku noolaan karaan 30 maalmood ka dib cilladda, oo u badan tahay in ay u dhintaan ama u baahan yihiin wadnaha oo xoog leh iyo taageerada neefsashada inta isbitaalka lagu jiro.
Waxay u badantahay in ay u dhintaan shan sano gudahood ka dib markii uu bilaabay cilladda cudurka.
Daraasadu kaliya waxay heshay xiriirka ka dhexeeya kansarka iyo cudurrada wadnaha; ma muujineyso in mid kale uu keeno kan kale. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa goob ay cilmi-baaris dheeraad ah u leeyihiin, qorayaasha daraasadu waxay leeyihiin.
"Farsamaynta [kansarka] iyo daaweynta kansarku waxay kor u qaadi kartaa horumarinta wadna xanuunka wadnaha oo jaban, natiijooyinkooduna waxay bixinayaan sababo dheeri ah si loo baaro saameynta wadnaha ee loo yaqaan 'chemotherapy'," qoraasha hogaaminta daraasadda, Dr. Christian Templin, Agaasimaha Daaweynta Wadnaha ee Kansarka ee Andreas Grüntzig Shaybaarada Qalitaanka wadnaha ee jaamacadda Heart Center Zürich oo ku yaal Isbitaalka Jaamacadda Zurich, Switzerland, ayaa lagu sheegay bayaanka
"Daraasadayada ... waa in ay kor u qaaddaa wacyiga ka dhex-saareyaasha iyo kansarka kaadimareenka ee jabiya cilladda wadnaha waa in lagu tixgeliyaa bukaanada xanuun yareh ama neefta oo gaaban. electrocardiogram, "Ayuu yiri Templin. Sidoo kale, "bukaanka qaba cilladda wadnaha wadnaha jaban ayaa laga yaabaa inay faa'iido haddii la baadho kansarka si loo hagaajiyo badbaadadooda guud," ayuu yiri.
Cudurka wadnaha ee qalafsan
Xaaladda ayaa markii hore la cayimay ee Japan ee 1990, halkaas oo lagu sheegay cudurka wadnaha, calaamadaha, sababta keenta wadnaha wadnaha.
Taa bedelkeeda, xaalada ayaa ah mid kacsan marka uu jiro qaliin culus - sida khasaaro dhaqaale, murugo xoog leh ama masiibo dabiiciga ah - wuxuu sababaa dhaawac xagga jirka ah. Cardiomyopathy ayaa soo galaya, maxaa yeelay qolka bambada wadnaha ee ballaaran ayaa kor u qaadaya oo si fiican u ma fiicna. Xanuunku wuxuu dareemaa sida wadnaha wadnaha, xanuunka feeraha iyo neefta oo gaabisa, laakiin ma jirto murqo xanuun oo aan lahayn xannibaad halbowleyaasha wadnaha oo quudinta wadnaha.
Heerarka sare ee hormoonnada walbahaarka ayaa loo maleynayaa inay tahay mid ka mid ah darawallada ugu muhiimsan ee xanuunka wadnaha ee jaban. Khubarada qaarkood waxay aaminsan yihiin in kansarku uu sidoo kale door ciyaari karo.
"Isku dhexmuuqda labada u dhaxaysa ma cadda, lakiin daweyno badan oo kansar ayaa sidoo kale saameyn kara wadnaha," ayuu yiri Dr. Laxmi Mehta, oo ah Agaasimaha ka hortagga wadnaha iyo caafimaadka wadnaha ee Ohio ee Jaamacadda Ohio State.
Mehta, oo aan ku lug laheyn cilmi-baaris cusub, wuxuu intaa ku daray in ay muhiim tahay in la eego bukaanka guud ahaan. "Qodobo badan oo halis ah oo ka dhexeeya kansarka iyo cudurrada wadnaha, sida sigaarka, taariikhda qoyska, cunto xumo iyo jimicsi la'aanta," ayay tidhi.
Cilmi-baaristii hore waxay muujisay in 5-fluorouracil iyo rituximab, laakiin sababta cudurka ayaa u badan tahay inuu dhaco.
Sababtoo ah, "haddii qof qabo cudur wadnaha iyo taariikhda kansarka, waxay u baahan yihiin inay arkaan dhakhtarka wadnaha iyo ka wada hadlaan haddii ay daryeelayaan," ayuu yiri Mehta.
Dr. Francesco Santoro, oo ah dhakhtar ku takhasusay Jaamacadda Foggia ee Talyaaniga iyo khabiir ku xeeldheer cilladda wadnaha wadnaha, ayaa sheegay in aysan aheyn wax ku filan in laga qaado kansarka. Laakiin wuxuu xusay in "cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay in la sameeyo si loo caddeeyo sababaha tan, iyo isku-darka daawooyinka wadnaha istaaga ee wadajirka ah ayaa bixin kara faa'iido."
"Ma hayo wax khibrad ah, laakiin waa farsamo cad, ka dibna laga yaabo in dhakhtaradu raadsadaan kansar," ayuu yiri.
FURLOW NBC CAAFIMAAD ON Twitter & Facebook
Dr. Shamard Charles waa saxafiga caafimaadka ee NBC News iyo Maanta, oo ka warbixinaya siyaasadda caafimaadka, dadaallada caafimaadka bulshada, kala duwanaanta daawada, iyo horumarinta cusub ee cilmi-baarista daryeelka caafimaadka iyo daaweynta caafimaadka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.nbcnews.com/health/heart-health/broken-heart-syndrome-may-be-linked-cancer-study-suggests-n1030571
Kansarka mindhicirka: Layligani wuxuu ku caawin karaa inuu la dagaallamo cudurka - ma tani ma samaynaysaa?
DADKA & LIFESTYLE2,988